Trading Platform Comparison Guide December 2021 | Learn2Trade Guide!
VIP FOREX SIGNAL GET
2021 အကောင်းဆုံးအခမဲ့ Forex Signal ကြေးနန်းအဖွဲ့များ
2021 အခမဲ့အခမဲ့ Crypto Signals ကြေးနန်း
အကောင်းဆုံး Crypto ကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းများ
အကောင်းဆုံး Crypto လောင်းကစားဝက်ဘ်ဆိုက်များ
4 မေလ 2021 | နောက်ဆုံးရေးသားချိန်: 25 နိုဝင်ဘာလ 2021
အင်တာနက်အသုံးပြုခွင့်ရှိသူမည်သူမဆိုရောင်းဝယ်နိုင်သော forex၊ စတော့များနှင့် cryptocurrencies ကဲ့သို့စျေးကွက်များသို့ ၀ င်ရောက်နိုင်သောအွန်လိုင်းပွဲစားရာပေါင်းများစွာရှိသည်။
အိမ်မှ Apple စတော့ရှယ်ယာများ၊ Bitcoin (သို့) ရွှေများကို ၀ ယ်ရောင်းရောင်း ၀ ယ်ခဲ့ဖူးသလား။ ယှဉ်ပြိုင်မှုများစွာဖြင့်မင်းအတွက်မှန်ကန်တဲ့ကုန်သွယ်မှုပလက်ဖောင်းကိုရှာဖို့အတွက်မင်းရဲ့အိမ်စာလုပ်ဖို့လိုလိမ့်မယ်။
စိတ်ထဲတွင်၊ ငါတို့သည်ဤပြည့်စုံမှုကိုစုစည်းထားသည် ကုန်သွယ်ပလက်ဖောင်းနှိုင်းယှဉ် လမ်းညွှန် အာကာသအတွင်း၌အကောင်းဆုံးအွန်လိုင်းပွဲစား ၅ ဦး ကိုကျွန်ုပ်တို့ပြန်လည်သုံးသပ်ပြီး၊ အကောင်းဆုံးပံ့ပိုးသူကိုသင်ကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်နိုင်ရန်အသေးစိတ်စစ်ဆေးရမည့်စာရင်းတစ်ခုနောက်တွင်ရှိသည်။
Eightcap - တင်းကျပ်စွာဖြန့်ထားသောပလက်ဖောင်း
အနည်းဆုံးဒေါ်လာ ၂၀ ပေးသွင်းရမည်
တင်းကျပ်စွာပြန့်ပွားနှင့်အတူ 100% ကော်မရှင် - အခမဲ့ပလက်ဖောင်း
Forex၊ ရှယ်ယာများ၊ ကုန်စည်များနှင့် Cryptocurrencies အပါအ ၀ င် CFD စျေးကွက်ထောင်ပေါင်းများစွာ
ယခု Eightcap သို့သွားပါ
ကုန်သွယ်ပလက်ဖောင်းနှိုင်းယှဉ် စိတ်ဖိစီးမှုကင်းသောအဆင့် ၄ ဆင့်မှတ်ပုံတင်ပါ
သင်အလျင်စလိုနှင့်ဘောလုံးကိုလှိမ့်ချင်လျှင်ဤလမ်းညွှန်ကိုနောက်မှအပြည့်အစုံဖတ်ပါ - အောက်ပါအဆင့် ၄ ဆင့်လမ်းညွှန်ကိုကြည့်ပါ။
အဆင့် 1: လေးစားစရာကောင်းသောကုန်သွယ်မှုပလက်ဖောင်းတစ်ခုနှင့်မှတ်ပုံတင်ပါ။ ကော်မရှင်မပါသောပွဲစား Capital.com သည်ကြီးကြီးမားမားထိန်းချုပ်ထားပြီးထောင်ပေါင်းများစွာသောစျေးကွက်များသို့ ၀ င်ရောက်နိုင်ရန်ပံ့ပိုးပေးပါသည်။
အဆင့် 2: သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့်ဆက်သွယ်ရန်အချက်အလက်များထည့်ပါ။ ထို့နောက်သင်၏ဓာတ်ပုံ ID နှင့်သင်၏လိပ်စာကိုပြသောတရားဝင်အသုံး ၀ င်ငွေတောင်းခံလွှာနှင့်ဘဏ်စာတိုကိုပို့ခြင်းဖြင့်သင်၏အထောက်အထားကိုသက်သေပြပါ။
အဆင့် 3: သင်၏ debit/credit card၊ e-wallet (သို့) bank wire ဖြင့်သင်၏အွန်လိုင်းအရစ်ကျအကောင့်သစ်သို့ရန်ပုံငွေထည့်ပါ။
အဆင့် 4: မည်သည့်အရောင်းအ ၀ ယ်ကိုဆုံးဖြတ်ပြီးအော်ဒါတင်ရမည်။
အွန်လိုင်းပွဲစားများကိုပြန်လည်သုံးသပ်သည့်အခါအရေးကြီးသောတိုင်းထွာမှုများကိုကျွန်ုပ်တို့စဉ်းစားသည်၊ ဤအရာအားလုံးကိုဤလမ်းညွှန်တွင်နောက်မှသင်ပြလိမ့်မည်။ သင်၏ကိုယ်ပိုင်သုတေသနကိုပြုလုပ်သောအခါဤအရာသည်အသုံးဝင်လိမ့်မည်။
၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်ကုန်သွယ်မှုပလက်ဖောင်းနှိုင်းယှဉ်သုတေသန၏ရလဒ်များကိုသပ်သပ်ရပ်ရပ်ဖြစ်စေသည်။ ထို့ကြောင့်ယခုအောက်တွင်သင်သည် online trading space တွင်ထိပ်တန်းပွဲစား ၅ ခုကိုအောက်တွင်တွေ့လိမ့်မည်။
၁။ AvaTrade - ပလက်ဖောင်းများကိုရွေးချယ်မှုများစွာဖြင့်ကွဲပြားခြားနားသောကုန်သွယ်မှုပလက်ဖောင်း
AvaTrade သည်ကုန်သွယ်ရန်ရနိုင်သောကွဲပြားသောစျေးကွက်ရာပေါင်းများစွာနှင့်ကော်မရှင်မပါသော CFD ကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ယခင်ကရနိုင်သောကုန်သွယ်ရေးကိရိယာများအတွက်သင်၏အကောင့်ကို MT4 (သို့) MT5 နှင့်လည်းချိတ်ဆက်နိုင်သည်။ ဤပွဲစားသည် Intel, Groupon, Tesla, Microsoft, Apple, Snapchat, Alibaba, Twitter, Proctor and Gamble, Mastercard, Adidas, Vodaphone နှင့်အခြားအရာများအပါအ ၀ င်ပိုင်ဆိုင်မှုများစွာကိုပေးသည်။
Starbucks, Medtronic, Kinder, Microsoft, Wells Fargo & Co, Colgate, Walmart, Netflix, Cisco Systems နှင့်အခြားများစွာကဲ့သို့ MT5 မှတဆင့်သာရောင်းဝယ်နိုင်သောအချို့သောစတော့များလည်းရှိသည်။ ညွှန်းကိန်းများတွင် DAX30, FTSE100, Nikkei225, ChinaA50, Spain 35, CAC 40, FTSE MIB, INDIA50 နှင့်အခြားအရာများပါဝင်သည်။ MT5 ကမ်းလှမ်းမှုများတွင် FAANG၊ အစိမ်းရောင်စွမ်းအင်နှင့် TSX60 တို့ပါဝင်သည်။ S & P500 VIX, Market Vectors TR Gold Miners နှင့် MT5 မှတဆင့်ပိုမိုရရှိနိုင်သော ETF များရွေးချယ်ခြင်းလည်းရှိသည်။
သင်သည်ငွေကြေးရောင်းဝယ်သူတစ် ဦး ဖြစ်လိုလျှင် AvaTrade တွင် forex နှင့် cryptocurrencies ကိုလည်းတွေ့လိမ့်မည်။ Forex အတွဲများတွင်အဓိက၊ အသေးစားများနှင့် EUR/ZAR, USD/CLP, USD/ZAR, EUR/RUB, USD/MXN, EUR/SEK နှင့်အခြားများစွာပါ ၀ င်သည်။ မင်းကဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးအမျိုးအစားတွေနဲ့စချင်ရင်မင်းရွေးချယ်မှုတွေနည်းသွားမှာမဟုတ်ဘူး။ ဤကုန်သွယ်မှုပလက်ဖောင်းနှိုင်းယှဉ်ချက်တွင် Dash, Ripple, Stellar, IOTA, Chainlink, Uniswap, IOS နှင့်အခြားအရာများပါ ၀ င်သည်။
ကုန်ပစ္စည်းများသည်မင်းအရာထက်ပိုပါကရေနံစိမ်း၊ အပူဆီနှင့်ဓာတ်ဆီမှကော်ဖီ၊ သကြား၊ ဂျုံနှင့်ပါလာဒီယမ်မှအရာအားလုံးကိုသင်ရောင်းဝယ်နိုင်သည်။ MT5 မှတဆင့်သင်လိမ္မော်ရည်၊ ကျွဲနွားများနှင့်အခြားစျေးကွက်များကိုလည်း ၀ ယ်နိုင်သည်။ ပြင်းထန်သောစည်းမျဉ်းသည် ASIC, CySEC, FSCA, MiFID, BVI နှင့်အခြားအရာများမှလာသည်။ ထို့ကြောင့်သင်၏ကိုယ်ပိုင်သတင်းအချက်အလက်များနှင့်ငွေပေးချေမှုများသည်ဤကုန်သွယ်မှုပလက်ဖောင်းပေါ်တွင်လုံခြုံလိမ့်မည်၊ ထို့ကြောင့်ငွေကြေးရာဇ ၀ တ်မှုသည်စိုးရိမ်စရာမဖြစ်သင့်ပါ။
အကယ်၍ သင်သည်လူမှုရေးကုန်သွယ်မှုကိုပေးလိုလျှင်၊ ဆိုရှယ်မီဒီယာတွင်သင်ကြိုက်သလိုလိုက် လုပ်၍ အဓိပ္ပာယ်ရှိသောလူများကို DupliTrade သို့မဟုတ် ZuluTrade မှတဆင့်ရောင်းဝယ်နိုင်သည်။ ဤကုန်သွယ်မှုပလက်ဖောင်းနှိုင်းယှဉ်ချက်အရ AvaTrade တွင်ရွေးချယ်ရန်ပလက်ဖောင်းရွေးချယ်စရာများစွာရှိသည်။ ၎င်းတွင်ရွေးချယ်စရာကုန်သည်များကိုရည်ရွယ်သော AvaOptions များပါဝင်သည်။ ထို့နောက် AvaTradeGO တစ်ခုရှိသည်၊ ၎င်းသည်သင့်အားတိုက်ရိုက်ကမ္ဘာ့စျေးကွက်များနှင့် ချိတ်ဆက်၍ ကုန်သွယ်မှုကိုအပြောင်းအရွေ့လုပ်နိုင်ရန်ခွင့်ပြုသည်။ ဤအခမဲ့အက်ပ်မှတဆင့်များစွာသော MT4 နှင့် MT5 အကောင့်များကိုသင်စီမံနိုင်သည်။
AvaSocial သည်ကူးသန်းရောင်းဝယ်မှု၊ ရာသီအလိုက်ကုန်သည်များကိုလိုက်ရန်၊ စိတ်ကြိုက်တည်ဆောက်ထားသောကုန်သွယ်မှုအချက်များကိုသတ်မှတ်ရန်နှင့်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ကုန်သွယ်ရေးကွန်ယက်ကိုဖန်တီးရန်ကူညီပေးသည်။ ဤကုန်သွယ်မှုပလက်ဖောင်းပေါ်တွင်အနည်းဆုံးအပ်ငွေသည်ဒေါ်လာ ၁၀၀ ဖြစ်ပြီးပွဲစားသည်သင်ငွေသွင်းလိုသောအခါငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းများစွာနှင့်လိုက်ဖက်သည်။ ၎င်းတွင် debit နှင့် credit card များ၊ Neteller, Skrill, WebMoney နှင့်အခြားအရာများပါ ၀ င်သည်။ သင်သည်စက္ကူရန်ပုံငွေများတွင်ဒေါ်လာ ၁၀၀၀၀၀ နှင့်သရုပ်ပြအကောင့်တစ်ခုကိုသင်အလိုရှိပါကပင်မစာမျက်နှာမှတဆင့်အလွယ်တကူစာရင်းပေးနိုင်ပါသည်။
ဒေါ်လာ ၁၀၀ သာ forex ကုန်သွယ်မှုစတင်ရန်အနည်းဆုံးအပ်ငွေ
သြစတေးလျ၊ အီးယူ၊ တောင်အာဖရိကနှင့်ဂျပန်အပါအ ၀ င်တရားစီရင်ပိုင်ခွင့် ၆ ခုတွင်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ထားသည်
မည်သည့်ပစ္စည်းတွင်မဆို ၀% ကော်မရှင်နှင့်ကုန်သွယ်ပါ
လက်လီရောင်းချသူများ၏ ၇၅% သည်ဤပံ့ပိုးသူနှင့် CFD များရောင်းဝယ်သောအခါပိုက်ဆံဆုံးရှုံးကြသည်
2. EightCap - ၂၀၀၀၀ ကျော်ကုန်ပစ္စည်းများကော်မရှင်မှကုန်သွယ်ခြင်း
Eightcap သည် ASIC နှင့် SCB မှ တရားဝင်ခွင့်ပြုပြီး ထိန်းညှိပေးသော နာမည်ကြီး MT4 နှင့် MT5 ပွဲစားဖြစ်သည်။ ဤပလပ်ဖောင်းပေါ်တွင် အရည်အချင်းမြင့်မားသော စျေးကွက် 500+ ကျော်ကို သင်တွေ့လိမ့်မည် - အားလုံးကို CFD များမှတစ်ဆင့် ကမ်းလှမ်းထားသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ သင်သည် ကာလတိုရောင်းချခြင်းစွမ်းရည်များနှင့်အတူ လွှမ်းမိုးနိုင်မှုအား ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ပံ့ပိုးပေးထားသော စျေးကွက်များတွင် Forex၊ ကုန်စည်များ၊ အညွှန်းကိန်းများ၊ ရှယ်ယာများနှင့် cryptocurrencies ပါဝင်သည်။ Eightcap သည် ပြန့်နှံ့မှုနည်းပါးရုံသာမက ပုံမှန်အကောင့်များအတွက် 0% ကော်မရှင်များ ပေးဆောင်သည်။ ကုန်ကြမ်းအကောင့်တစ်ခုဖွင့်ပါက 0.0 pips မှ အရောင်းအ၀ယ်လုပ်နိုင်ပါသည်။ ဤနေရာတွင် အနိမ့်ဆုံးအပ်ငွေမှာ $100 သာရှိပြီး သင့်အကောင့်ကို ဒက်ဘစ် သို့မဟုတ် ခရက်ဒစ်ကတ်၊ အီး-ပိုက်ဆံအိတ် သို့မဟုတ် ဘဏ်ဝိုင်ယာဖြင့် ရန်ပုံငွေပေးရန် သင်ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။
500+ ပိုင်ဆိုင်မှုကော်မရှင် - အခမဲ့ကျော်ကုန်သွယ်
Leverage ကန့်သတ်ချက်များသည် သင့်တည်နေရာအပေါ် မူတည်ပါသည်။
ဒီပလက်ဖောင်းမှာ CFDs ကုန်သွယ်သည့်အခါသင့်ရဲ့မြို့တော်ဆုံးရှုံးမှုအန္တရာယ်ကိုမှာဖြစ်ပါတယ်
၃။ Capital.com - မျက်နှာသစ်သူများအတွက်အကောင်းဆုံးကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်း - ဒေါ်လာ ၂၀ မှစပေါ်ငွေ
eToro တွင်ဖြစ်သည့်အတိုင်းထိပ်တန်းအဆင့်ပွဲစား Capital.com သည်အသစ်ရောက်လာသူတိုင်းအတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤ CFD ကုန်သွယ်မှုပလက်ဖောင်းကို MT4 နှင့်ပူးပေါင်းသည်၊ ထို့ကြောင့်သင်သည်သင်၏အကျိုးဆောင်ကိုတတိယပါတီပံ့ပိုးသူနှင့်ချိတ်ဆက်နိုင်ပြီးအခြားကိရိယာများနှင့်လုပ်ဆောင်ချက်များများစွာကိုရယူနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့မည်သည့်စျေးကွက်များရရှိထားသည်ကိုကြည့်ပြီးကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှရှယ်ယာ CFD ၂၄၀၀ ကျော်ကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ၎င်းတွင် Nintendo, Toyota, Fujitsu, Lenovo, Easy Jet, eBay, Spotify, Uber, Johnson & Johnson နှင့်အခြားကုမ္ပဏီထောင်ပေါင်းများစွာပါဝင်သည်။
ဤကုန်သွယ်မှုပလက်ဖောင်းနှိုင်းယှဉ်ခြင်းကို Capital.com ရှိကမ္ဘာပေါ်တွင်လူကြိုက်အများဆုံးညွှန်းကိန်းအချို့ကိုတွေ့သည်။ ၎င်းတွင် HK50, FR40, IT40, UK100, EU50, US500 နှင့်အခြားများစွာပါဝင်သည်။ forex စျေးကွက်များသည်သင့်အတွက်ပိုမိုသင့်တော်ပါကဤနေရာတွင်ရောင်းဝယ်ရန်အတွဲ ၇၀ ကျော်ကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။ ၎င်းတွင်အဓိက၊ အသေးစားနှင့် exotics တို့ပါ ၀ င်သည်။ စွန့်စားလိုစိတ်ရှိသူများအတွက်၊ နောက်ဆုံးတွင် USD/MXN, EUR/RON, GBP/RUB, NOK/TRY, USD/ZAR, AUD/MXN နှင့်အခြားအရာများပါ ၀ င်သည်။
မင်း cryptocurrencies ကိုပိုကြိုက်ရင်ဒီကုန်သွယ်မှုပလက်ဖောင်းနှိုင်းယှဉ်မှုကမတူညီတဲ့ CFD အတွဲ ၇၀ ကျော်ကိုတွေ့ရတယ်။ ၎င်းတွင် BTC/USD, ETH/USD, BTC/EUR, ETH/EUR, NEO/USD နှင့်အခြားအရာများကဲ့သို့ crypto-fiat ကမ်းလှမ်းမှုများပါ ၀ င်သည်။ ထို့နောက် ADA, BTC, XRP/BTC, NEO/BTC, TRX/BTC, BCH/BTC, XEM/BTC, ETH/BTC ကဲ့သို့ crypto-cross အတွဲများရှိသည်။ Capital.com သည်မကြာသေးမီက Defi ဒင်္ဂါးပြားများကိုလည်းထည့်သွင်းခဲ့သည်။ မင်းကသူတို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုမယူဘဲအရေးကြီးတဲ့အရာတွေကိုမင်းရဲ့အစုလိုက်အပြုံလိုက်ထည့်ချင်တယ်ဆိုရင်မင်းမှာ CFD စျေးကွက်တွေအများကြီးရနိုင်တယ်။
၎င်းတွင်ဓာတ်ဆီ၊ ဆီ၊ ငွေ၊ သကြား၊ အလူမီနီယံ၊ ဂျုံ၊ ကြေးနီနှင့်အခြားအရာများပါဝင်သည်။ Capital.com ရှိစျေးကွက်အများစုတွင်ပျံ့နှံ့မှုသည်တင်းကျပ်ပြီး၊ မင်းကော်မရှင်မပေးဘဲမည်သည့်ပစ္စည်းကိုမဆိုရောင်းဝယ်နိုင်သည်။ ဤအနိမ့်ကြေး CFD ကုန်သွယ်မှုပလက်ဖောင်းသည်လူတိုင်းအတွက်သွားလာရလွယ်ကူစေရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ထို့ပြင်သင်ကြိုးများကိုသင်ယူရန်အခမဲ့ပညာရေးဆိုင်ရာသင်တန်းများအတွက်ရည်စူးထားသောကဏ္ is တစ်ခုရှိသည်။ ၎င်းတွင် CFDs များနှင့်ငွေရေးကြေးရေးဆင်းသက်လာမှုများအပြင်မိတ်ဆက်သင်ခန်းစာများ၊ နည်းဗျူဟာများနှင့်ရှာဖွေရန်ခက်ဆစ်တစ်ခုပါ ၀ င်သည်။
မင်းရဲ့ Capital.com အကောင့်ကို MT4 နဲ့ချိတ်ဖို့ရွေးရင်မင်းလည်းအလိုက်သင့်ညွှန်ပြနိုင်တဲ့အချက်တွေအပြင်ကုန်သွယ်မှုအချက်ပြတွေ၊ Capital.com သည်ဤ third-party trading platform မှတဆင့်အခမဲ့သရုပ်ပြအကောင့်တစ်ခုကိုလည်းပေးပါလိမ့်မည်။ ဤနည်းအားဖြင့်သင်သည်မတူညီသောစျေးကွက်များကိုစမ်းနိုင်ပြီးစွန့်လွတ်နိုင်မှုနှင့်အန္တရာယ်/ဆုလာဘ်အချိုးများဖြင့်ကစားနိုင်သည်။
စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့ CySEC၊ FCA၊ ASIC၊ နှင့် NBRB တို့သည် ဤပွဲစားကို စောင့်ရှောက်ထားသည်။ ထို့ကြောင့် သင်သည် သတ်မှတ်ထားသော အလေ့အကျင့်ကျင့်ထုံးများကို လိုက်နာနိုင်သည့် ဂုဏ်သိက္ခာရှိသော ကုမ္ပဏီတစ်ခုနှင့် ဆက်ဆံနေပါသည်။ CFD များကို ရောင်းဝယ်ရန်အတွက် အနည်းဆုံး အပ်ငွေ $20 သာ လိုအပ်ပြီး ပွဲစားသည် အပ်ငွေအမျိုးအစားများစွာကို လက်ခံပါသည်။ ၎င်းတွင် ဒက်ဘစ်နှင့် ခရက်ဒစ်ကတ်များ၊ Trustly၊ Apple Pay၊ iDeal နှင့် အခြားအရာများကဲ့သို့သော အီး-ပိုက်ဆံအိတ်များ ပါဝင်သည်။
နည်းပညာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသောကိရိယာများကိုရယူနိုင်ရန် Capital.com ကို MT4 သို့ဆက်သွယ်ပါ
အရောင်းအဝယ်စတင်ရန် Minumum အပ်ငွေသည်ဒေါ်လာ ၂၀ သာရှိသည်
FCA၊ CySEC၊ ASIC၊ နှင့် NBRB တို့မှ လိုင်စင်ရ နှင့် ထိန်းညှိထားသည်။
၅။ LonghornFX - အဆင့်မြင့် ECN ပွဲစားတစ် ဦး
LonghornFX သည် အသုံးပြုသူနှင့် အဆင်ပြေသော ကုန်သွယ်မှုပလပ်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး cryptocurrency နှင့် forex အတွဲများစွာကို လွှမ်းခြုံထားသည်။ သင်သည် စတော့ရှယ်ယာ CFD များနှင့် အညွှန်းကိန်းများစွာကိုလည်း ရောင်းဝယ်နိုင်သည်။ သင်သည် လက်လီရောင်းချသူ သို့မဟုတ် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဖောက်သည်ဖြစ်စေ မသက်ဆိုင်ဘဲ LonghornFX တွင် 1:500 အထိ လွှမ်းမိုးမှုဖြင့် ကုန်သွယ်မှုပြုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
အခကြေးငွေ၏စည်းကမ်းချက်များ၌, သင်ကုန်သွယ်နေ့တစ်လျှောက်လုံးအပြိုင်အဆိုင် variable ကိုပြန့်ပွားခြင်းမှအကျိုးပါလိမ့်မယ်။ နောက်ဆုံးတွင် LonghornFX သည် ECN ပွဲစားတစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်သင်သည်စက်မှုလုပ်ငန်းတွင်ရရှိနိုင်သမျှစျေးအပေါဆုံးဝယ် / ရောင်းဈေးကိုရရှိလိမ့်မည်။ ကော်မရှင်သည်ပိုင်ဆိုင်မှုပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားလိမ့်မည်။ သို့သော်ပုံမှန်အားဖြင့်ကုန်သွယ်မှုဒေါ်လာ ၁၀၀၀၀၀ လျှင် ၇ ဒေါ်လာအထိရှိသည်။
LonghornFX သည်ထုတ်ယူခြင်းတောင်းဆိုမှုများကိုတစ်နေ့တည်းတွင်လုပ်ဆောင်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့ကြိုက်သည်။ ထို့အပြင်ပွဲစားသည် MT4 ကိုအပြည့်အဝထောက်ခံသည်။ platform ကိုအွန်လိုင်း၊ desktop ဆော့ဝဲလ်မှဖြစ်စေ၊ မိုဘိုင်း app မှတစ်ဆင့်ဖြစ်စေဝင်ရောက်နိုင်သည်။
စူပါတင်းကျပ်စွာ - ပြန့်ပွားနှင့်အတူ ECN ပွဲစား
1 ၏မြင့်မားသောသြဇာ: 500
ပလက်ဖောင်း BTC သိုက်ကြိုက်နှစ်သက်သည်
ဤပံ့ပိုးသူနှင့် CFD ရောင်းဝယ်သောအခါသင်၏အရင်းအနှီးသည်အန္တရာယ်ရှိသည်
ကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းတစ်ဝိုက်တွင်သင်၏လမ်းကိုရှာဖွေနိုင်ခြင်းသည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ အထူးသဖြင့်သင်တစ်ခဏအတွင်းအသိပေးမှုတစ်ခုအားဈေးကွက်အော်ဒါမှာနိုင်စွမ်းရှိလိုလျှင်အထူးသဖြင့်ဤကိစ္စတွင်ဖြစ်သည်။ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းသည်ငွေရှာနိုင်သည့်အခွင့်အလမ်းကိုညွှန်ပြသောအခါသင်နောက်ဆုံးလိုအပ်သောအရာသည်သင့်ကိုကျောထောက်နောက်ခံပြုထားသည့်ရှုပ်ထွေးသည့်အပြင်အဆင်ဖြစ်သည်။
ဤကုန်သွယ်မှုပလက်ဖောင်းနှိုင်းယှဉ်လမ်းညွှန်တွင်ပွဲစားအချို့သည်အကသီချင်းဆိုပြိုင်ပွဲအားလုံး၌ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသည်ကိုတွေ့သည်။ ၎င်းကိုကောင်းစွာချထားသောအခါသို့မဟုတ်သင်အဆင့်မြင့်ကုန်သည်တစ် ဦး ဖြစ်လျှင်၎င်းသည်အလွန်ကောင်းသည်။ သို့သော်လမ်းကြောင်းပိုရှိလေ၊ ပိုရှုပ်ထွေးသောကုန်သွယ်မှုသည်သင်၏ပျမ်းမျှဂျိုးအတွက်ဖြစ်လာသည်။
ကျွန်ုပ်တို့အများစုသည်ဖော်ပြချက်အချို့၏အင်္ဂါရပ်များနှင့်ကိရိယာများကိုလိုချင်သော်လည်းအရေးအကြီးဆုံးအရာမှာသင်အလိုရှိသောစျေးကွက်ကိုလွယ်ကူစွာနှင့်မှာယူနိုင်သည်ကိုသေချာစေရန်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ပြန်လည်သုံးသပ်ထားသောပွဲစားများမှသွားလာရန်အလွယ်ဆုံးကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းများမှာ AvaTrade, eToro နှင့် Capital.com တို့ဖြစ်သည်။ ပလက်ဖောင်းအားလုံးသည်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ပြီးလွယ်ကူသောအသုံးပြုရလွယ်ကူသောဒိုင်ခွက်မှတဆင့်ကော်မရှင်မပါသောကုန်သွယ်မှုကိုပေးသည်။
Regulatory Body မှလိုင်စင်
အနည်းဆုံးစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအဖွဲ့အစည်းတစ်ခု၏အုပ်ချုပ်မှုအောက်တွင်လည်ပတ်ခြင်းမရှိလျှင်အကျိုးဆောင်တစ် ဦး အပေါ်အန္တရာယ်ယူခြင်းနှင့်မထိုက်တန်ပါ။ လိုင်စင်မရှိလျှင်သင်သည်မည်သည့်ပလက်ဖောင်းအမျိုးအစားနှင့်နောက်ဆုံးတွင်သင်၏အရင်းအနှီးမည်မျှလုံခြုံသည်ကိုသင်မသိနိုင်ပါ။
စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ထားသောပွဲစားများသည်သူတို့၏လိုင်စင်နံပါတ်များနှင့်မှတ်ပုံတင်အသေးစိတ်ကိုဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်နေရာတွင်ပြသည်။ FCA, ASIC, GFCA, MiFID, CySEC နှင့် FSCA ကဲ့သို့သောအလောင်းများကိုသင်သတိထားသင့်သည်။ အားလုံးကိုကောင်းစွာလေးစားပြီးဘဏ္spaceာရေးရာဇ ၀ တ်မှုနှင့်အရိပ်ရအကျိုးဆောင်ကုမ္ပဏီများမှကုန်သွယ်ရေးနေရာကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ထားပါ။
အထက်ဖော်ပြပါငွေကြေးအဖွဲ့အစည်းများ၏ကုန်သွယ်မှုပလက်ဖောင်းသည်သင်၏ကုန်သွယ်မှုရန်ပုံငွေများကို၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ဘဏ်အကောင့်တစ်ခုတွင်လုံခြုံစွာထားရှိစေရန်သေချာစေလိမ့်မည်။ ပွဲစားသည် KYC (သင့်ဖောက်သည်ကိုသိပါ) စည်းမျဉ်းများ၊ ID အထောက်အထားရယူရန်၊ စာရင်းစစ်တင်ပြရန်နှင့်အခြားအရာများကိုလည်းလိုက်နာရပါမည်။
သင်၏ကိုယ်ပိုင်ကုန်သွယ်မှုပလက်ဖောင်းနှိုင်းယှဉ်ခြင်းကိုပြုလုပ်သောအခါ၊ ကျူးလွန်ခြင်းမပြုမီမည်သည့်ငွေကြေးဆိုင်ရာကိရိယာအမျိုးအစားများကိုသင်မြင်နိုင်ရန်အရေးကြီးသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ရိုးရာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများနှင့် CFDs များကိုရောင်းဝယ်ရန်ရွေးချယ်ခွင့်ကိုသာပေးနိုင်သောအွန်လိုင်းပွဲစားများရှိသည်။
CFD သည်အရင်းခံပစ္စည်း၏တန်ဖိုးကိုအမြဲထင်ဟပ်ပြလိမ့်မည်။ ဤအရာသည်သင်အရင်းခံပစ္စည်း၏လက်ရှိတန်ဖိုးကို အခြေခံ၍ ရောင်းဝယ်ခြင်းကိုဆိုလိုသည်၊ ၎င်းသည်၎င်း၏ ဦး တည်ချက်သို့ကျဆင်းခြင်းမှအမြတ်သို့ ဦး တည်နိုင်သည်။
အချို့သောပလက်ဖောင်းများသည်လည်းရိုးရာအပြန်အလှန်ရန်ပုံငွေနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်၎င်းသည်တက်တက်ကြွကြွမစီမံနိုင်ပါ။ ETF များသည်စျေးကွက် ဦး ထုပ်အလေးချိန်အညွှန်းကိုစောင့်ကြည့်သည်။ စိတ်ကူးသည်သင်ပိုင်ဆိုင်သောအရင်းအနှီးများ၌ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလျှင်သင်မျှော်လင့်ထားသည့်အမြတ်ကိုအတုခိုးရန်ဖြစ်သည်။
သင်ရွေးသောအရစ်ကျခွင့်ပြုလျှင် ETFs များကိုလည်း CFDs အဖြစ်ရောင်းဝယ်နိုင်သည်။ ထိပ်တန်းအဆင့် eToro သည်ရေရှည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများနှင့်ကာလတိုချေးငွေ CFDs နှစ်ခုလုံးကိုကော်မရှင်မပါ ၀ င်ဘဲရောင်း ၀ ယ်နိုင်သောပိုင်ဆိုင်မှုထောင်ပေါင်းများစွာကိုဖုံးလွှမ်းသည်။ ထို့ပြင်ကုန်သွယ်မှုပလက်ဖောင်းအား CySEC, FCA, နှင့် ASIC တို့ကထိန်းချုပ်ထားပြီး US ဖောက်သည်များအတွက် SEC နှင့် FINRA တို့နှင့်လည်းမှတ်ပုံတင်ထားသည်။
သငျသညျငှါ crypto ရောင်းဝယ်ခြင်း ခဏလောက်နေပြီးတစ်ချို့ကိုချင့်ချိန်ကြည့်ပါ ကုန်စည်မင်းကိုနားလည်ဖို့သာ သာ သင်မှတ်ပုံတင်ထားသောကုန်သွယ်မှုပလက်ဖောင်းတွင် Gold ၏ရွေးချယ်မှုရှိသည်။ ဤအချက်ကိုစိတ်ထဲ ထား၍ ရွေးချယ်ရန်စျေးကွက်များရှိသောအွန်လိုင်းပွဲစားကိုရှာပါ။
ကျွန်ုပ်တို့ပြောခဲ့သည့်အတိုင်း eToro သည်နိုင်ငံတကာစျေးကွက် ၁၇ ခုမှစတော့ရှယ်ယာ ၂၄၀၀ ကျော်အပြင် forex အတွဲများ၊ cryptocurrencies၊ ညွှန်းကိန်းများ၊ ETFs များနှင့်ကုန်စည်များစုပုံရာကို ၀ ယ်ယူနိုင်သည်။ ရနိုင်သောအရာအတွက်သတိပေးချက်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ eToro ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းသို့ scroll လုပ်ပါ။
သင်ကုန်သွယ်မှုပလက်ဖောင်းနှိုင်းယှဉ်မှုများပြုလုပ်သောအခါပွဲစား၏အခကြေးငွေဇယားကိုစစ်ဆေးရန်အရေးကြီးသည်။ တစ်ယောက်ကမင်းကိုအရောင်းအ ၀ ယ်နဲ့သုညကော်မရှင်ပေးဖို့ခွင့်ပြုနိုင်တယ်၊ အခြားတစ်ယောက်ကမင်းဖွင့်လိုက်ပိတ်လိုက်တိုင်းမှာကိန်းရှင်တစ်ခုဒါမှမဟုတ်သတ်မှတ်ထားတဲ့ရာခိုင်နှုန်းကိုကောက်ခံလိမ့်မယ်။
မင်းဒေါ်လာ ၁၀၀၀ တန်အော်ဒါတင်ပြီးကုန်သွယ်မှုပလက်ဖောင်းကနေရာတစ်ခုစီမှာ ၃% ကျသင့်တယ်
စျေးကွက်ထဲ ၀ င်ဖို့မင်းဒေါ်လာ ၃၀ ကော်မရှင်ပေးရမယ်။
ငွေထုတ်ပြီးသောအခါသင်၏ကုန်သွယ်မှုသည်ဒေါ်လာ ၁၄၀၀ တန်သည်ဟုဆိုသည်
မင်းရဲ့ရာထူးကိုပိတ်ဖို့မင်းဒေါ်လာ ၄၂ ကော်မရှင်ပေးရလိမ့်မယ်
စုစုပေါင်း၊ သင်အရောင်းအ ၀ ယ်ကိုပိတ်ရန်အွန်လိုင်းပွဲစားဒေါ်လာ ၇၂ ကိုသင်ပေးခဲ့သည်
မင်း eToro မှာဒီအမိန့်ချထားခဲ့ရင်ကုန်သွယ်မှုပလက်ဖောင်းကစျေးကွက်အားလုံးမှာ ၁၀၀% ကော်မရှင်ခမပါတဲ့အတွက်မင်း ၇၂ ဒေါ်လာချမ်းသာလိမ့်မယ်။
စောင့်ကြည့်ရန်နောက်ထပ်အခကြေးငွေသည်ပျံ့နှံ့မှုတွင်ပါဝင်သည်။ ဒါကမင်းအရောင်းအဝယ်လုပ်တဲ့ပစ္စည်းရဲ့ ၀ ယ်ရောင်းရောင်းတန်ဖိုးရဲ့ခြားနားချက်ဘဲ။ အထူးသဖြင့်အဓိက forex အတွဲများတွင်စျေးကွက်အများစုတွင်တင်းကျပ်သောပြန့်နှံ့မှုများရှိသည်ကို AvaTrade နှင့် eToro တို့ကတွေ့ရှိခဲ့သည်။
သိသာထင်ရှားသည်မှာဤကုန်သွယ်မှုပလက်ဖောင်းနှိုင်းယှဉ်မှုတွင်အဆင်ပြေသောငွေသွင်းအမျိုးအစားများဖြစ်သော PayPal သို့မဟုတ် debit ကတ်များကိုပံ့ပိုးပေးသောအခြားပွဲစားများရှိခဲ့သည်ကိုတွေ့ရှိသော်လည်းအခြားသူများက၎င်းတို့ကိုလုံးဝလက်ခံလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ သင်အရောင်းအဝယ်အခကြေးငွေအတွက်သင်ပေးချေရမည့်အတိုင်းအတာသည်သင်နှင့်ပူးပေါင်းမည့်အွန်လိုင်းပွဲစားပေါ်မူတည်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ပြည့်စုံသောပြန်လည်သုံးသပ်မှု၌ထိမိသည်နှင့်အမျှ eToro သည် PayPal၊ debit/credit card များနှင့်အခြားအရာများကိုလက်ခံသည်။ ဤကုန်သွယ်မှုပလက်ဖောင်းသည်သင် USD မဟုတ်သောငွေသွင်းခြင်းပြုလုပ်လျှင်သင်အသုံးပြုသောနည်းလမ်းအားမခွဲခြားဘဲသင့်အကောင့် (၀.၅%) ကိုသာရန်ပုံငွေကောက်ခံလိမ့်မည်။
သင်သဘောပေါက်ဖွယ်ရှိသည်နှင့်အညီကုန်သွယ်မှုပလက်ဖောင်းနှစ်ခုသည်အတိအကျတူညီသည်မဟုတ်။ ထို့ကြောင့်၊ သင်ကုန်သွယ်မှုကိုစိတ်အားထက်သန်စွာရှာဖွေနေလျှင်၊ တူသောအရာတစ်ခုကိုသုံးပါ autotrading စက်ရုပ် ဥပမာ (သို့မဟုတ် EAs)၊ ဤအချက်ကိုပွဲစားကသေချာထောက်ခံရန်လိုသည်။
အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်အပြည့်အဝအလိုအလျောက်ကုန်သွယ်မှုသည် MT4 သို့မဟုတ် MT5 ကဲ့သို့တတိယပါတီများမှတစ်ဆင့်လုပ်ဆောင်လေ့ရှိသည်။ အွန်လိုင်းပွဲစားအားလုံးသည်ဤပလက်ဖောင်းများနှင့်ပူးပေါင်းခြင်းမရှိပါ။ သတိမထားသူများအတွက်စက်ရုပ်များနှင့် EAs များသည်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအတွက်အခွင့်အလမ်းများရှာဖွေရန်နှင့်သင်၏အကျိုးဆောင်များမှတဆင့်မှာယူမှုများပြုလုပ်ရန် software များဖြစ်သည်။ စက်ရုပ်၏ကုန်ကျစရိတ်ကိုအမြဲစစ်ဆေးပါ။
ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တာကမင်းအဆင်ပြေအောင်လုပ်နိုင်တဲ့ကုန်သွယ်မှုပလက်ဖောင်းကိုပိုကြိုက်လိမ့်မယ် Forex အချက်ပြမှုများဒါမှမဟုတ် စတော့ရှယ်ယာအချက်ပြမှုများ? ၎င်းသည်နည်းပညာလေ့လာခြင်း (သို့) လေ့လာခြင်းမှသင့်ကိုကယ်တင်သည်။ Learn2Trade တွင်ဤနေရာတွင် forex၊ စတော့များနှင့် cryptocurrencies များကိုလွှမ်းခြုံထားသောအရည်အသွေးမြင့်အချက်ပြများကိုကျွန်ုပ်တို့ပေးသည်။ စိတ်ကူးသည်ခန့်မှန်းရန်နေရာမချန်ရန်အရောင်းအဝယ်အမိန့်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုစီကိုအသေးစိတ်ခြင်းဖြင့်စျေးကွက်များသို့ ၀ င်ရောက်ရန်လမ်းညွှန်ရန်ဖြစ်သည်။
ရလဒ်များကိုကျွန်ုပ်တို့၏ Telegram အဖွဲ့ဝင်များသို့ကုန်သွယ်အချက်ပြအဖြစ်ပို့သည်။
တစ်ခုစီတွင်ပိုင်ဆိုင်မှု၊ ၀ င်ငွေစျေးနှုန်း၊ ၀ ယ်ရောင်းနှင့်အမှာစာနှင့်အကျိုးအမြတ်ယူခြင်းနှင့်ရပ်တန့်ဆုံးရှုံးခြင်းကဲ့သို့အမှာစာတိုင်း၏တန်ဖိုးများပါ ၀ င်သည်။
သင်လုံးဝစွန့်လွတ်နိုင်သော virtual အစုစုကို အသုံးပြု၍ AvaTrade သို့မဟုတ် eToro တွင်လွယ်ကူသောကုန်သွယ်မှုအချက်ပြများကိုစမ်းကြည့်နိုင်သည်။ passive ကုန်သွယ်မှုအတွေ့အကြုံကိုခံစားရန်ကျွန်ုပ်တို့အားသင်စေလွှတ်သောအမိန့်အကြံပြုချက်များကိုရိုးရှင်းစွာထည့်ပါ။
ယနေ့ကုန်သည်များအတွက်လူကြိုက်အများဆုံးသောအင်္ဂါရပ်များအနက်တစ်ခုမှာကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ၀ န်ဆောင်မှုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အချိန်အစာငတ်နေသော pros များ (သို့) နည်းပညာဆန်းစစ်ခြင်းကိုနားလည်သောလေ့ကျင့်မှုမရှိသေးသောကျွမ်းကျင်သူကုန်သည်များကိုတူအောင်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ ဤအရာသည်အမှန်တကယ်စူးစမ်းလေ့လာရမည့်အင်္ဂါရပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
သူတို့ကြိုက်နှစ်သက်သောစျေးကွက်ပေါ် မူတည်၍ Copy Trader တစ် ဦး ကို ရွေးချယ်၍ သူတို့၏သမိုင်းဝင်အကျိုးအမြတ်များ၊ ကုန်သွယ်မှုစွမ်းဆောင်ရည်၊ စွန့်စားရမှတ်နှင့်အခြားအရာများအပေါ် မူတည်၍ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံပါ။ ရလဒ်များကိုကွဲပြားသောအချိန်ဘောင်များ၊ အခြားသူများမည်မျှကူးယူသည်ကို၎င်း၊ ပိုင်ဆိုင်မှုခွဲဝေမှုကို ဦး စားပေးသောရာခိုင်နှုန်းများဖြင့်လည်းကောင်းစစ်ထုတ်နိုင်သည်။
Copy Trader သည်သူတို့၏အစုရှယ်ယာ ၂ ရာခိုင်နှုန်းကို Google စတော့တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံပြီး Brent ရေနံစိမ်း CFD သို့ ၂% ခွဲဝေပါကသင်၏တောင်း၏ ၄ ရာခိုင်နှုန်းကိုတူညီသောရာထူးများခွဲဝေပေးလိမ့်မည်။ အရေးကြီးသည်မှာ၊ သင်၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်အချိုးအစားတွက်ချက်လိမ့်မည်။ ဒါကြောင့်ဒီအခြေအနေမှာမင်းဒေါ်လာ ၁၀၀၀ ရင်းနှီးရင်မင်းမှာ Google အတွက်ဒေါ်လာ ၂၀ နဲ့ Brent ရေနံစိမ်း CFD ကုန်သွယ်မှုမှာဒေါ်လာ ၂၀ ရနိုင်တယ်။
အခမဲ့ Demo အကောင့်
ထိပ်တန်းအဆင့်ပွဲစားများကမ်းလှမ်းသည် သရုပ်ပြကုန်သွယ်မှုပလက်ဖောင်းများ -မင်းလိုချင်တဲ့စျေးကွက်ကို ၀ င်ရောက်နိုင်ဖို့စွန့်လွတ်နည်းလမ်းတစ်ခုကိုကမ်းလှမ်းပါ။ ဤနှိုင်းယှဉ်လမ်းညွှန်၌ပြန်လည်သုံးသပ်သောပံ့ပိုးပေးသူတစ် ဦး စီကိုသင်အခမဲ့အစုစု Simulator တစ်ခုပေးပါလိမ့်မည်။ ၎င်းကိုလေ့ကျင့်ရန်နှင့်မဟာဗျူဟာကျရန်စက္ကူရန်ပုံငွေများဖြင့်တင်ဆောင်လာလိမ့်မည်။ သရုပ်ပြအရင်းအနှီးတွင်သင်ရရှိသောပမာဏသည်သင်မည်သည့်ပွဲစားနှင့်သင်စာရင်းသွင်းသည်ပေါ်မူတည်သည်။
ပြန်လည်အမှတ်ရရန်ထိပ်တန်းအဆင့်ကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်း eToro နှင့်ပူးပေါင်းသည့်အခါသင်နှစ်ခုလုံးအစစ်အမှန်တစ်ခုကိုအလိုအလျောက်ရလိမ့်မည် နှင့် virtual အစုစု ပထမရွေးချယ်မှုကမင်းရဲ့အရင်းအနှီးနဲ့အစစ်အမှန်စျေးကွက်တွေကိုမင်းမြင်နိုင်လိမ့်မယ်။ အဆုံးစွန်သောအရာများတွင် virtual equity တွင်ဒေါ်လာ ၁၀၀၀၀၀ ပါ ၀ င်သည်၊ စျေးကွက်အမျိုးမျိုး၏အတွင်းအပြင်ကိုလေ့လာနိုင်၊ စွန့်ပစ်စီမံခန့်ခွဲမှုကိုနားလည်ရန်နှင့်နည်းပညာဇယားခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန်သင်၏ဇယားဖတ်စွမ်းရည်ကိုမြှင့်တင်ရန်ဖြစ်သည်။
Trading Platform ရွေးချယ်မှု accounts ကို
စံပြကုန်သွယ်မှုပလက်ဖောင်းကိုရှာတဲ့အခါမင်းမှာအကောင့်တစ်ခုရဲ့ရွေးချယ်မှုလိုအပ်သလား၊ မင်းရဲ့ကိုယ်ပိုင်ပန်းတိုင်တွေပေါ်မူတည်လိမ့်မယ်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ သင်သည်သင်၏ပုံမှန်လက်လီဖောက်သည်တစ် ဦး အဖြစ်မြင်လျှင် - အွန်လိုင်းပွဲစားအများစုကမ်းလှမ်းသောစံအကောင့်နှင့်သင်ပျော်ရွှင်လိမ့်မည်။
တစ်နေ့လှေခါးကိုတက်ချင်ရင်ပိုအဆင့်မြင့်တဲ့ကုန်သွယ်မှုပလက်ဖောင်းတစ်ခုနဲ့ sign up လုပ်ဖို့ရွေးနိုင်တယ်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ အချို့ပွဲစားများသည်သုညပြန့်ပွားမှု၊ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအကောင့်မန်နေဂျာများ၊ အဆင့်မြင့်အဆင့်များနှင့်ပွဲများသို့ဖိတ်ကြားခြင်းကဲ့သို့အပိုဆောင်းအခွင့်အရေးများပါ ၀ င်သောပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဖောက်သည်အကောင့်များကိုပေးသည်။
ဤကုန်သွယ်ပလပ်ဖောင်း နှိုင်းယှဉ်လမ်းညွှန်တွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် 2021 ခုနှစ်၏ အကောင်းဆုံးအွန်လိုင်းပွဲစားများ၏ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ပြန်လည်သုံးသပ်မှုများနှင့် သင်ကိုယ်တိုင် သုတေသနပြုလုပ်သည့်အခါ သတိထားရမည့်အရာများကို ပေးထားပါသည်။
ဘောလုံးလှိမ့်ရန်ကျွန်ုပ်တို့သည် Capital.com တွင်မည်သို့ ၀ င်ရန်စာရင်းသွင်းပုံအဆင့်ဆင့်လမ်းညွှန်ကိုစာရင်းပြုစုထားသည်။
အဆင့် ၁: Trading Platform တစ်ခုနှင့်မှတ်ပုံတင်ပါ
Capital.com သို့ သွား၍ အခမဲ့စာရင်းသွင်းရန် 'Join Now' ကိုနှိပ်ပါ။ သင်၏အမည်၊ ရွေးချယ်ထားသောအသုံးပြုသူအမည်နှင့်အခြားလိုအပ်သောအချက်အလက်များထည့်ပါ။ မင်းကိုချက်ချင်းလိုလိုကြိုဆိုနေတဲ့ကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းကနေအီးမေးလ်တစ်စောင်လက်ခံသင့်တယ်။
သင်၏ပရိုဖိုင်သို့သွားရန်အီးမေးလ်အတွင်းရှိ link ကိုလိုက်နာပါ။
အဆင့် ၂ - သင်၏ ID ကိုအတည်ပြုပါ
Capital.com သည် FCA၊ CySEC၊ ASIC နှင့် NBRB တို့မှ လိုင်စင်များကို ပံ့ပိုးထားသည်။ ထို့ကြောင့်၊ ကုန်သွယ်မှုပလပ်ဖောင်းသည် KYC စည်းမျဉ်းများကို လိုက်နာပြီး သင့် ID နှင့် လိပ်စာအထောက်အထားကို ရယူရပါမည်။ သင့်ပရိုဖိုင်ကို စဖွင့်သတ်မှတ်ခြင်း အပြီးသတ်ရန် ၎င်းကို လုပ်ဆောင်ရပါမည်။ ယင်းအတွက်၊ သင်သည် သင်၏ပတ်စ်ပို့ သို့မဟုတ် ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်မိတ္တူကို အပ်လုဒ်လုပ်နိုင်သည်။
မင်းရဲ့လိပ်စာကိုအတည်ပြုဖို့မင်းကမကြာသေးမီကဘဏ်ရှင်းတမ်းတစ်ခုရဲ့ဒစ်ဂျစ်တယ်မိတ္တူဒါမှမဟုတ်အသုံး ၀ င်ရှင်းတမ်းတစ်ခုရဲ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဓာတ်ပုံကို ၆ လအတွင်းပို့နိုင်တယ်။ Capital.com မှာမပြည့်စုံသောပရိုဖိုင်းတစ်ခုနဲ့အရောင်းအဝယ်လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာသတိပြုသင့်ပါတယ်။ သို့သော်ဤလုပ်ငန်းစဉ်မပြီးဆုံးမချင်းသင်ငွေထုတ်ခြင်းသို့မဟုတ်ငွေသွင်းခြင်းဒေါ်လာ ၂,၂၅၀ ထက်ပိုပေးနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
လှမ်း 3: သင်၏အကောင့်ထဲသို့သိုက်ရန်ပုံငွေများ
ဤကုန်သွယ်မှုပလက်ဖောင်းနှိုင်းယှဉ်ချက်အရ Capital.com သည်မြင်ကွင်းတွင်ပွဲစားအချို့နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းများကိုလက်ခံသည်။ ငါတို့ထိလိုက်တာနဲ့မင်းငွေတွေကို PayPal, debit/credit card, ဒါမှမဟုတ် bank wire သုံးပြီးမင်းရဲ့အကောင့်ထဲကိုငွေသွင်းနိုင်တယ်။
သင်၏ပရိုဖိုင်၏ဘယ်ဘက်ရှိ 'Deposit Funds' ကိုနှိပ်ပါ။ ထို့နောက် drop-down menu မှသင်နှစ်သက်သောငွေပေးချေမှုအမျိုးအစားကို ရွေးချယ်၍ သင်ဆက်လုပ်ရန်ပျော်ရွှင်ပါက 'ငွေသွင်းပါ' ကိုနှိပ်ပါ။
အဆင့် (၄) ကုန်သွယ်မှုလုပ်ဖို့စျေးကွက်ရှာပါ
အခုမင်းမှာကုန်သွယ်ရန်ပုံငွေအချို့ရှိလို့မင်းရယူလိုတဲ့စျေးကွက်ကိုရှာနိုင်တယ်။ သင်၏ရွေးချယ်မှုများသည်စိတ်ကူးများအတွက်သို့မဟုတ်ရှာဖွေရန်အကွက်ထဲတွင် 'ကုန်သွယ်မှုစျေးကွက်များ' ကိုနှိပ်ပါ။
ဒီမှာငါတို့ဆွစ်ဖရန့်နဲ့ cryptocurrency Dash ကိုရောင်းဝယ်ဖို့ရှာနေတယ်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ရှာဖွေမှုအကွက်၌ 'DASH' ကိုရိုက်ထည့်ပြီးပိုင်ဆိုင်မှုဘေးရှိ 'ကုန်သွယ်မှု' ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။
အဆင့် (၅): Trading Order တင်ပါ
ဒီအဆင့်မှာမင်းရဲ့အော်ဒါကို trading platform မှာတင်နိုင်ပါတယ်။ ဤအရာသည်သင်ရရှိသောအချက်ပြသတိပေးချက်၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များ (သို့) သင်ကိုယ်တိုင်သင်ပြုလုပ်ခဲ့သောသုတေသနအပေါ် အခြေခံ၍ ခန့်မှန်းချက်တစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။
သတိမထားမိသူများအတွက် stop-loss ကိုပေါင်းစပ်ပြီးသင်ယူသည့်ရာထူးတိုင်းတွင်အမြတ်တန်ဖိုးကိုယူခြင်းသည်ပညာရှိရာရောက်သည်။ ၎င်းသည်ကုန်သွယ်မှုတိုင်းအတွက် risk balance ကိုထည့်ရန်နည်းလမ်းကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်ဖြည့်ထားသောအချက်အလက်များမှန်ကန်ကြောင်းစစ်ဆေးပြီးပါကသင်၏အမိန့်ကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန် Capital.com သို့အချက်ပေးရန် Set Order ကိုနှိပ်ပါ။
ဤကုန်သွယ်မှုပလက်ဖောင်းနှိုင်းယှဉ်ချက်သည်အာကာသ၌အလွန်အကောင်းဆုံးအွန်လိုင်းပွဲစားများကိုပြန်လည်သုံးသပ်ရန်ရှာဖွေခဲ့သည်။ ဤအတွက်၊ စည်းမျဉ်း၊ ၀ င်ကြေးနည်း၊ အင်္ဂါရပ်များ၊ စျေးကွက်မျိုးစုံ၊ လက်ခံငွေသွင်းနည်းများနှင့်အခြားအရာကဲ့သို့အရေးကြီးသောအချက်များစွာကိုကျွန်ုပ်တို့ဖုံးလွှမ်းခဲ့သည်။
ထိန်းညှိထားသောပွဲစား Capital.com သည်မျက်နှာစာအားလုံး၌အတောက်ပဆုံးကိုထွန်းလင်းစေသည်။ ကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းတစ်ခုအောက်တွင်ကော်မရှင်အခကြေးငွေတစ်ရာခိုင်နှုန်းမပေးဘဲကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိကွဲပြားခြားနားသောစျေးကွက်ထောင်ပေါင်းများစွာကိုသင် ၀ င်ရောက်နိုင်သည်။ ဤပွဲစားသည်သင်အားအောင်မြင်သောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတစ် ဦး ကိုထင်ဟပ်စေသောထင်ရှားသော Copy Trader အင်္ဂါရပ်လည်းဖြစ်သည်။
Capital.com ၀ ယ်သူအားလုံးသည် virtual အစုရှယ်ယာတွင်ဒေါ်လာ ၁၀၀k ဖြင့်အခမဲ့သရုပ်ပြအကောင့်ကိုလက်ခံရရှိသည်၊ ၎င်းသည်ပလက်ဖောင်းနှင့်သင်ရင်းနှီးရန်သို့မဟုတ်သင်နှင့်မရင်းနှီးသောစျေးကွက်များဖြစ်နိုင်သည်။ လက်ခံနိုင်သောငွေပေးချေမှုအမျိုးအစားများစွာရှိသည်၊ သင် ၀ ယ်လိုသောစျေးကွက်ပေါ် မူတည်၍ ကုန်သွယ်မှုတစ်ခုလျှင် ၂၅ ဒေါ်လာလောက်သာရင်းနှီးမြှုပ်နှံနိုင်သည်။
အသစ်အဆန်းများအတွက် အကောင်းဆုံးကုန်သွယ်မှုပလပ်ဖောင်းသည် Capital.com ဖြစ်သည်။ ဝဘ်ဆိုဒ်သည် သွားလာရန် အလွန်လွယ်ကူသည်၊ ရရှိနိုင်သော CFD ပေါင်းထောင်ပေါင်းများစွာအတွက် မည်သည့်ကော်မရှင်ကိုမျှ ကောက်ခံမည်မဟုတ်ပါ။ နှင့်ဟုတ်ပါတယ် - ပွဲစားကိုအပြည့်အဝထိန်းချုပ်ထားသည်။ အကယ်၍ သင်သည် သမားရိုးကျသဘောအရ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန် ရှာဖွေနေပါက - လိုင်စင်ရ ပွဲစား eToro သည် FCA၊ ASIC၊ CySEC နှင့် NBRB လက်အောက်ရှိ ထောင်ပေါင်းများစွာသော စျေးကွက်များတွင် ကော်မရှင်မပါဘဲ ကုန်သွယ်မှုကို ပေးဆောင်သည့် အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုတစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။
သင်ဆန္ဒရှိသလောက်ကုန်သွယ်မှုပလက်ဖောင်းများစွာတွင်သင်ကုန်သွယ်နိုင်သည်။ ထိုအရာနှင့်အတူ၊ သင်၏အစုစုတစ်ခုလုံးကိုအမိုးတစ်ခုအောက်၌ထားခြင်းသည် ပို၍ ရှုပ်ထွေးသွားလိမ့်မည်။ ဤအကြောင်းကြောင့်၊ သင်အိမ်စာမ ၀ င်မီနှင့်သင်လိုအပ်သမျှကိုတစ်နေရာတည်း၌ရရန်သေချာသည်။ ကော်မရှင်-အခမဲ့ပွဲစား eToro သည် forex၊ ကုန်စည်များ၊ စတော့များ၊ ETFs နှင့် cryptocurrencies များကို ဖြတ်၍ ရိုးရာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများနှင့် CFDs များကိုသုံးခွင့်ပေးသည်။ ပံ့ပိုးသူသည်အငယ်စားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကိုပံ့ပိုးပေးသည်။
သင်၏ကိုယ်ပိုင်ကုန်သွယ်မှုပလက်ဖောင်းနှိုင်းယှဉ်ခြင်းကိုပြုလုပ်သောအခါအရေးကြီးဆုံးတိုင်းတာချက်များကိုကြည့်သင့်သည်။ ၎င်းတွင်စည်းမျဉ်းများနှင့်လိုင်စင်များ၊ ရနိုင်သောစျေးကွက်များ၊ အခကြေးငွေနည်းခြင်း၊ အသုံးပြုရလွယ်ကူခြင်းနှင့် CFD များအားသင်၏ရွေးချယ်ထားသောပိုင်ဆိုင်မှုတွင်ပံ့ပိုးပေးခြင်းရှိမရှိတို့ပါ ၀ င်သင့်သည်။
အဖြေသည်သင်ရွေးချယ်ရန် online trading platform ပေါ်တွင်မူတည်သည်။ သင်ငွေသွင်းခြင်းမပြုမီသင်ပံ့ပိုးပေးသူအားလုံးသည်အခမဲ့သရုပ်ပြအကောင့်တစ်ခုကိုသုံးခွင့်ပြုလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေနှင့် eToro တွင်သင်အခမဲ့အကောင့်တစ်ခုဖွင့်နိုင်သည်။ ထို့နောက်သင်ပတ်ပတ်လည်ကိုကြည့်ပြီးစက္ကူရန်ပုံငွေများတွင်ဒေါ်လာ ၁၀၀၀၀၀ နှင့်အခမဲ့သရုပ်ပြကုန်သွယ်ရေးအကောင့်ကို သုံး၍ မှာကြားနိုင်သည်။
ကုန်သွယ်ပလက်ဖောင်းမပါဘဲ MT4 ကိုငါသုံးလို့ရမလား။
မဟုတ်ပါ၊ MT4 သည်အွန်လိုင်းပွဲစားရာပေါင်းများစွာနှင့်ပူးပေါင်းထားသောတတိယပါတီကုန်သွယ်ရေးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ဤနည်းလမ်းကိုသင် ၀ ယ်ရောင်း ၀ ယ်လိုလျှင်သင်နှင့်လိုက်ဖက်သောအကျိုးဆောင်မှတဆင့်ပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်သည်။ ထိပ်တန်းအဆင့်ပလက်ဖောင်း AvaTrade နှင့် Capital.com သည် MT4 နှင့်ဟန်ချက်ညီညီလုပ်ဆောင်ပြီးကုန်သွယ်မှုအတွက်မည်သည့်ကော်မရှင်ကိုမှသင်ကောက်ခံမည်မဟုတ်ပါ။
၂၀၂၁ အကောင်းဆုံး Forex Signal များ
Forex Signal များအသုံးပြုနည်း
Forex Trading သင်တန်း
Forex Signals ကြေးနန်း
Crypto Signals ကြေးနန်း
Learn2Trade သည် Gadget Geek Online Ltd ၏ကုန်သွယ်ရေးနာမည်ဖြစ်သည်
ရုံး ၁/၂၃၇၃၊ အဆင့် G၊ Quantum House၊ ၇၅ Abate Rigord လမ်း၊ Ta 'Xbiex, XBX 1, Malta
Learn2.trade ဝက်ဘ်ဆိုက်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ Telegram အုပ်စုအတွင်းရှိသတင်းအချက်အလက်များသည်ပညာရေးရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ရည်ရွယ်ထားပြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာအကြံဥာဏ်အဖြစ်အဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူရန်မဟုတ်ပါ။ ဘဏ္marketsာရေးစျေးကွက်များအရောင်းအ ၀ ယ်သည်စွန့်စားရမှုမြင့်မားပြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူအားလုံးအတွက်မသင့်တော်ပါ။ အရောင်းအဝယ်မပြုမီသင်၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရည်မှန်းချက်များ၊ အတွေ့အကြုံနှင့်စွန့်စားလိုစိတ်ကိုသေချာစွာစဉ်းစားသင့်သည်။ သင်ဆုံးရှုံးရန်အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီဖြစ်သောငွေဖြင့်သာကုန်သွယ်ပါ။ မည်သည့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနည်းတူမဆို၊ သင်ကုန်သွယ်နေစဉ်အတွင်းသင်၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအချို့သို့မဟုတ်အချို့ဆုံးရှုံးမှုများကိုသင်ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ သင်သံသယရှိပါကကုန်သွယ်ခြင်းမပြုမီလွတ်လပ်သောအကြံဥာဏ်တောင်းခံသင့်သည်။ စျေးကွက်တွင်အတိတ်ကစွမ်းဆောင်ရည်များသည်အနာဂတ်စွမ်းဆောင်ရည်အတွက်စိတ်ချရသောညွှန်ပြချက်မဟုတ်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ Telegram အုပ်စုများအတွင်း၌ပါဝင်သောအကြောင်းအရာများကြောင့်ဆုံးရှုံးမှုအတွက် Learn2.trade သည်တာဝန်မရှိပါ။ အသင်း ၀ င်အဖြစ်စာရင်းသွင်းခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘဏ္financialာရေးဆိုင်ရာအကြံဥာဏ်များပေးနေခြင်းမဟုတ်ကြောင်းနှင့်သင်စျေးကွက်၌သင်ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုများကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချနေကြောင်းသင်အသိအမှတ်ပြုသည်။ သင်နှင့်သင်ရောင်းဝယ်မှုပမာဏနှင့်ကုန်သွယ်မှုတစ်ခုချင်းစီတွင်သင်ပြုလုပ်နေသောစွန့်စားမှုပမာဏတို့ကိုကျွန်ုပ်တို့မသိပါ။
မူပိုင်ခွင့်© 2021 သင်ယူ2ကုန်သွယ်ရေး